Ebumnuche 7 kpatara ịgbanwee na Philippines | Akụkọ Njem
Ihe kpatara 7 iji gbaga na Philippines
Maria | | Philippines, Asia njem
Philippines bụ mba pụrụ iche. Ọbụghị naanị na mbara ala kamakwa n'ọdịbendị na mmụọ. E wezụga njirimara anụ ahụ a na-apụghị ịgbagha agbagha, mba a nwere ikuku pụrụ iche nke na-adọrọ ndị niile maara ya.
Philippines bụ agwaetiti nwere agwaetiti 7.107 nke sitere n'aka King Felipe II. Ọdịdị ya dị ebube ma sie ike: usoro pụrụ iche nke nkume, osimiri mara mma, nnukwu ugwu mgbawa ... Ma omume ọma ya bụkwa ndị ọzọ n'ihi na amaara mba a nke ọma maka ile ọbịa nke ndị ya na gastronomy ya bara ụba yana mmetụ ndị Hispaniki gụnyere.
Ọ bụrụ na ị na-eche echiche ịgagharị na Philippines, lee ụfọdụ ihe kpatara mba a ji bụrụ nnukwu ihe ọzọ maka Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia na-ewu ewu.
1 Filipinzị akarịghị akarị
2 Osimiri ahụ bụ paradaịs
3 Philippines zuru oke maka iso ndị enyi ma ọ bụ di na nwunye gaa njem
4 Obodo na-anabata ndị ọbịa
5 Gastronomy nke Philippines
6 Philippines maka ecotourists
7 Ndị bi n'obodo ga-atọkwa Philippines ụtọ
Filipinzị akarịghị akarị
N'adịghị ka akụkụ ndị ọzọ nke Eshia, Philippines anaghị anabata ọtụtụ ndị njem nleta n'ihi ya, ọ bụ ebe pụrụ iche. A ka nwere ọtụtụ ebe ịchọpụta dịka Agwaetiti Agwọ ma ọ bụ Agwaetiti Entalula, na Palawan.
Osimiri ahụ bụ paradaịs
Philippines nwere ụfọdụ oke osimiri na agwaetiti dị ịtụnanya n'ụwa (mgbe niile, o nwere ihe karịrị puku asaa) yana n'ime mmiri ya dị ọcha na nke kristal, ị nwere ike ịhụ ụdị anụmanụ dịgasị iche iche na-egwu mmiri. Ihe ngosi a ị ga - achọpụta n’okpuru mmiri ya bụ ezigbo mma: turtles, whale shark, coral gardens…. Ma mmiri igwu mmiri ma ọ bụ iji sọlị ị nwere ike ịtụgharị uche na akụ mmiri mara mma ya.
Ala nke oké osimiri dị ịtụnanya. Boracay's White Beach bụ otu n'ime ụsọ mmiri kpakpando nke mba ahụ, nnukwu ahịhịa mara mma nke Mindoro na Tubbataha bụ ihe ama ama dị ka ogige coral nke Anilao. Onye kachasị nwee obi ike nwere ike ibi ndụ ahụ igwu mmiri na whale shark na Donsol.
Maka ndị na-ahọrọ atụmatụ izu ike karịa, ọ ga-ekwe omume ịpịpụta ịchọta akụ zoro ezo dị ka ihe dị iche iche nke ụgbọ mmiri Japan bụ Olympia Maru.
Philippines zuru oke maka iso ndị enyi ma ọ bụ di na nwunye gaa njem
Ọ bụ nnukwu ebe ị ga - ezukọ na ụlọ ọrụ ma banye n’ime ya. N'ebe a, ndị njem nwere ike igwu mmiri na shark, nyochaa agwaetiti dị n'ọzara, banye na ebe pụrụ iche, gbagoo ugwu mgbawa, nwee ọmarịcha echiche nke ubi osikapa ochie, ma ọ bụ banye n'oké ọhịa iji zute ebo.
Obodo na-anabata ndị ọbịa
Ndị Filipinz na-echebara ndị mmadụ echiche, ha na-enwekwa mmasị n’ebe ndị ha na-ezute nọ. Omume ha na-emeghe ma na-enwe mmekọrịta ya mere na ọ dị mfe ịmalite mkparịta ụka na ha ma mata ha nke ọma.
Tagalog anaghị esiri ike ịmụ ma ọ bụrụ na ị ma asụ asụsụ. Mgbe ndị Spen rutere Philippines, ndị amaala enweghị okwu ọ bụla maka ọtụtụ ihe dịka awa ma ọ bụ ụbọchị izu. Ọ bụ ya mere ha ji gbanwee ụda asụsụ Hispanic n’asụsụ ha. Examplesfọdụ ihe atụ bụ ndụdụ, jan, ma ọ bụ ụgbọ ala.
Osikapa, otu n’ime ihe ndị dị na nri Philippine
Nri Philippine na-enwe mmetụta dị ukwuu site na nri ndịda ọwụwa anyanwụ Asia na Hispanic. Dị ka a na-achị, ndị Filipinz na-eri nri ugboro atọ n'ụbọchị: almusal (nri ụtụtụ), tanghalian (nri ehihie) na hanupan (nri abalị), ọ bụ ezie na n'ehihie, ha nwekwara aperitif akpọ meryenda, nke dabere na buns ma ọ bụ chọkọletị.
Osikapa bụ ihe dị mkpa na nri Philippine ka a na-eri ya na nri ọ bụla Ha hụrụ ya n'anya nke ukwuu na ọbụlagodi ụlọ nri nri ngwa ngwa nke America na-enye ya ihe dị iche iche.
Kare-kare bụ otu n’ime nri anụ a kacha mara amara na Philippines
Na nri Philippine, ndị Spanish hapụrụ akara ha na narị afọ atọ nke ịchị ha site na iwebata ihe ndị dị ka tomato, ọka, na galik. yana usoro nkọwapụta nke stew, marinades, marinades na nkwadebe nke sausaji pụtara ìhè. N’ezie, e nwere ọbụna ndị Filipino chorizo!
Dị ka efere ọdịnala anyị nwere ike ịkpọ pancreit malabon, onye ntọala ya bụ noodles, yabasị, ose na tomato; na suman, osikapa bọọlụ ọbọp na banana epupụta; na kare kare, nri ehi na azu.
A na-eji mango Filipin na-atọ ụtọ ọtụtụ ihe desser, nke dị ka ọchịchọ ịmata ihe, ghọrọ akụkụ nke ndekọ Guinness dị ka mkpụrụ osisi kachasị dị ụtọ ma dị ụtọ n'ụwa. Agbanyeghi na efere nri kachasị ewu ewu bụ halo-halo nke nwere medley nke ihe eji eme nri na uda dị ụtọ, chickpeas, aki oyibo, osikapa, banana caramelised na ice kụkọrọ akụ.
Philippines maka ecotourists
Ndị njem nlegharị anya na-abịa Philippines na ebumnuche nke ibi ndụ pụrụ iche dị ka igwu mmiri na shark, ịgagharị agwaetiti ọzara, ịba mmiri na ebe ndị pụrụ iche, ịrị ugwu ugwu mgbawa, ịnụ ụtọ echiche nke ubi osikapa na-adịghị mma ma ọ bụ ịbanye n'ime ọhịa iji zute ha. nke ebo nile.
Dịka ọmụmaatụ, Chohol Hills nke Bohol (nke mejupụtara ugwu 1268) na mbara ala osikapa nke Banaue (nke e wuru ihe karịrị puku afọ abụọ gara aga) bụ mpaghara ndị yiri ka esi n'ụwa ọzọ.
Tụkwasị na nke a, ọ ga-atọkwu ndị njem ụtọ ụtọ ịgagharị na nke ọ bụla ọkụ ọkụ gbawara n’agwaetiti ndị ahụ. Ihe atụ ụfọdụ bụ nnukwu ugwu Pinaturbo ma ọ bụ ugwu Taal, nke pere mpe na Philippines.
Ndị bi n'obodo ga-atọkwa Philippines ụtọ
Manila, isi obodo Philippines, bụ obodo nwere nnukwu ọdịiche. Ebe a na-agwakọta nke oge a na ọdịnala, ịda ogbenye na akụ na ụba na nke ọma na nke osisi.
Mmetụta America na Philippines pụtara ìhè ọ bụ ezie na a ka na-ahụta Spen na Manila, ma ọ bụ n'okporo ámá ọ bụla, square, ụka ma ọ bụ ihe ngosi nka. N'ụzọ dị otú a, ọ na-achọsi ike ịgagharị n'okporo ámá Tetuán ma ọ bụ Dasariñas yana ịga leta mahadum mbụ Asia nke ndị Spain guzobere (Universidad de Santo Tomás) ma ọ bụ gụọ ihe ncheta ncheta na Spanish.
N'oge awa na-agba ọsọ ọ bụ ihe amamihe dị na ya izere okporo ụzọ na ịgagharị gburugburu mgbidi ime obodo, nke na-enye anyị ohere ịmịkọrọ oge Spanish nke Philippines. N'ebe a, onye njem ahụ ga-ahụ ọtụtụ ụlọ ahịa ndị omenkà na nnukwu patio dị n'ime ụlọ iji zuru ike n'ọgba aghara nke ụgbọ ala ndị ahụ nwere n'èzí.
Ụfọdụ n'ime Ebe kachasị mma ịga leta na Manila bụ: Mahadum Santo Tomás, Fort nke Santiago, Katidral Manila, Chọọchị San Agustín ma ọ bụ Sanctuary nke San Antonio, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » Ihe kpatara 7 iji gbaga na Philippines